हेर्नुहोस श्रावण ७ गते बुधबारको राशिफल, श्रीदक्षिणकाली माताले सबैको कल्याण गरुन – News Np Online
क’ल्प’ना दा’हाल आ’ज ए’काए’क रु’दैरु’दै आ’इन मि’डि’या’मा , आ’खिर कि’न य’तिस’म्म भ’यो त (भिडियो
नेपालमै यस्तो, टिकटकमा भाईरल यो अचम्मको ठाउँमा पुग्दा । सगरमाथा चढ्नेदेखि समुद्रमुनि पुग्नेको भिड (भिडियो हेर्नुस)
उर्लाबारी युवक मृ’त्यु प्रकरणबारे आयो नसोचेको खुसीको खबर।हार्दिक बधाई सदीक्षा बहिनीलाई।
१८ बर्षमै क्यान्सर ,कस्ति थिइन यस्ति भइन,म बाच्न चाहान्छु मलाई बचाइदिनुस् (हेर्नुस् भिडियो )
७ वर्षसम्म एकै स्थानमा नहल्ली बस्ने सक्ने दुर्लभ जीव भेटे बैज्ञानिकले, जो १ सय वर्ष भन्दा बढी बाँच्छ (भिडियो)
“ने’पाल’मा प’नि भो’लि बा’ट टि’कट’क ब*न्द हु’दै’छ !”
मनमा मायाँ भए RIP लेख्नु होला ! ,सुत्केरी अवस्थामा २ पटक अपरेशन हुँदा ज्यान गुमाउने २४ वर्षिया अनिशा, बच्चाको बि चल्ली
विदेशवाट महिनाको एक लाख पठाउने श्रीमान छोडेर २ छोराछोरीकी आमा प्रेमीसंग गइन्, गर्भ बसेपछि प्रेमी गायब (भिडियो हेर्नुस्)
श्रीमानले ,अप्रे’सन गरेर बच्चा जन्माउने ठाउ फालिदिए, म बच्चा जन्माउन स’क्दिन : गायिका सरस्वती लामा (भिडियो सहित)
मुख्य पृष्ठ /Horoscop/हेर्नुहोस श्रावण ७ गते बुधबारको राशिफल, श्रीदक्षिणकाली माताले सबैको कल्याण गरुन
हेर्नुहोस श्रावण ७ गते बुधबारको राशिफल, श्रीदक्षिणकाली माताले सबैको कल्याण गरुन
2672minutes read
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल श्रावण ७ गते बुधबार इश्वी सन २०२० जुलाई २२ तारीख श्रावण शुक्लपक्ष द्वितीया तिथी अष्लेषा नक्षत्र सिद्धि योग वालव करण चन्द्रंमा कर्कट राशिमा आनन्दादि योगमा राक्षस योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहने योग रहेकोछ । मान्यजनको स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । गरीरहेको कार्यका श्रेत्रमा सामान्य ढिलाईको सम्भावना रहेकोछ । सवारी साधनको प्रयोगमा साबधानी अपनाउनु पर्नेछ । जिवन साथीको सहयोगमा जटिल कार्य सम्पादीत रहनेछन ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) आय आर्जनका निम्ती अधिक श्रम तथा यात्रा गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । मित्रजन तथा दाजुभाई बिचको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । मान्यजन हरुको साथ सहयोग मनग्य प्राप्तहुनेछ । मान प्रतिष्ठामा सामान्य आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । यात्राका क्रममा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
मिथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) भोजभतेर तथा सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनाले मन प्रशन्न रहनेछ । बाणीमा अस्थीरता छाउनाले नजिकका आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) मनोबिलासिताका साधनको प्रयोगले समय ब्यतित रहनेछ । ब्यपार ब्यवसायका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । स्वास्थ क्षेत्रमा सामान्य सुधार रहनेछ । रोकिएर रहेका कार्य सम्पादित हुनाले मन प्रशन्न रहला । पारीवारिक साथ सहयोगमा अधुराकार्यहरु सम्पादित रहनेछन । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ ।
सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) कार्य सम्पादन प्रति अरुको दबावको महसुस हुनाले दिन तनाब पूर्ण ब्यतित रहला । प्रतिश्पर्दिहरु सवल रहनाले हर कदममा सजग रहनु होला । स्वास्थमा देखिएको समस्याका कारण सामान्य खर्चको योग रहेकोछ । परीवारका सदस्यहरु बाट टाढा भएको महसुस रहनेछ । गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नु होला ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) आय आर्जनका बिभिन्न श्रोत साधनहरु फेला परेतापनि मानसिक चन्चलताले कार्य श्रेत्रमा ब्यवधान आई पर्नेछ । अध्यन अध्यानपनमा अधिक समय ब्यतित गर्नु पर्नेछ । शुभ चिन्तकहरुको बृद्यि हुनेछन । रचनात्मक कार्यका क्षेत्रमा समय ब्यतित गर्दा उत्तम प्रतिफल प्राप्त रहनेछ । बोलिका कारण आफन्त जनहरु सगँ तनाब उत्पन्न हुनेछ ।
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहगायीता साथै सामान्य मान प्रतिष्ठा प्राप्तीको योग रहेकोछ । कार्यप्रतिको लगन सिलतामा बृद्यि हुनेछ । मनोरञ्जनका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । मानसिक चन्चलताले सताउनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहला । नयाँ कार्य थालनिमा साबधान अपनाउनु होला ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) यात्राका क्रममा सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । तपाइको कार्यसम्पादनको श्रेय गैर ब्यतित्वहरुले प्राप्त गर्नेछन । नजिकका मित्रजनहरुसगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुनेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । परिवारका सदस्यहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य मन मुटाब उत्पन्न हुनेछ ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) स्वास्थ सम्बन्धी समस्याका कारण सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । कार्य क्षेत्रमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । खानपानका क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु होला । पुरानो लगानि उठाउन समयले साथ दिनेछ । गैर ब्यक्तित्वहरुका कारण कार्य क्षेत्रमा सामान्य दवावको सामना गर्नुपर्ने सम्भाबना रहनेछ ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) शारीरिक आलस्यताका कारण गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य खराबी उत्पन्न हुन सक्नेछ । मान प्रतिष्ठामा सामान्य आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ । अध्यन अध्यापन मध्यम रहनेछ ।
कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) तपाईको द्वारा सम्पादित कार्यमा त्रुटि देखाउनेहरुको बृद्यिहुनेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ । यात्रामा सामान्य झन्झट आईपर्न सक्नेछ । सामाजीक कार्यका क्षेत्रमा जुट्ने बिशेष समय रहेकोछ ।
मीन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) बौधिक ब्यत्तित्वहरुको साथ सहयोगमा दिर्धकालिन आम्दानिका श्रोतहरु फेला पर्नेछन । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । रचनात्मक तथा कला कौशलका क्षेत्रबाट सामान्य आम्दानि लिन सकिनेछ । स्वास्थका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना समेत रहेकोछ । स्वास्थमा सामान्य सुधारको योग रहेकोछ ।
असार ७ गते आज इतिहासकै दुर्लभ खण्डग्रास सूर्य ग्रहण, कति बजे लाग्ने र यी ८ राशिलाई उच्च प्रभाव पार्ने हेर्नुहोस राशिफल
एक मुखे रुद्राक्षको दर्शनले नसोंचेको ठाउँबाट हुन्छ धन “लाभ”!
आज २०७७ भदौ ३ गते बुधबारको राशिफल
सुत्ने बेलामा मुक्तिनाथको दर्शन गरि भोलिको राशीफल हेर्नुहोस
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, असोज २ गते शुक्रबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
43 mins अघि
47 mins अघि